Ciidamada Ammaanka ee Dhuusamareeb oo Gacanta ku dhigay Wax yaabaha Qarxa+Sawiro | HalQaran.com
Ciidamada Ammaanka ee Dhuusamareeb oo Gacanta ku dhigay Wax yaabaha Qarxa+Sawiro
Dhuusamareeb (Halqaran.com)- Ciidamada Ammaanka Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda dowlad Goboleedka Galmudug ayaa inay Gacanta ku soo dhigay Waxyaabaha Qarxa kuwaas oo ku diyaarsanaa Meel lagu qariyay.
Taliska ciidanka Booliska ee Dagmada Dhuusamareb ayaa ku waramay inay ku raad joogaan ragii waday waxyaabaha qarax, iyagoona tilmaamay in qaraxa lala doonayay in lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan Magaalada.
Saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya in waxyaabaha qarxa lagu diyaariyey mid kamid ah guryaha ku yaalla Magaalada dhuusamareeb,isla markaana Ciidamada ay soo saareen, iyadoona weli baaritaano ay ka socdaan xaafadaha Magaalada Dhuusamareeb.
Taliyaha Booliiska Dhusamareeb ahna Taliyaha Ciidamada Xasilinta Gaashaanle C/llaahi Xassan Macallin ayaa waxa uu sheegay in Howlgal Ciidamadu sameeyeen lagu soo qabtay Qaraxaan, kaasi oo laga soo helay meel ka mid ah Xaafada Dayax ee Magaalada Dhusamare.
Si kastaba ha noqotee Ammaanka Dhuusamareeb ayaa maalmihii lasoo dhaafay aad loo adkeeyay, waxaana lagu wadaa dhawaan in ay ka dhacdo Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo mida Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug.